Izay rehetra mieritreritra fa natao ho an'ny ankizy ihany ny mandoko dia diso be. Ao amin'ny tontolon'ny haitao sy nomerika ankehitriny, ny sary hoso-doko sy ny famoronana dia firoboroboan'ny olon-dehibe koa. Mihabetsaka ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra no manaiky ny lanjan'ny sary hoso-doko sy ny vokany miala sasatra. Raha maniry mafy hahita ny lalan'ny zavakantoo ianao izao, dia aza avela hanakana anao izany ary hanitatra ny faravodilanitrao.
Malvorlage für Erwachsene – Kraniche
Pejy fandokoana ho an'ny olon-dehibe - vorona